Fikradda uu Tababare Jurgen Klopp ka qabo dib u soo laabashada Philippe Coutinho ee garoonka Anfield oo daaha laga rogay – Gool FM
Fikradda uu Tababare Jurgen Klopp ka qabo dib u soo laabashada Philippe Coutinho ee garoonka Anfield oo daaha laga rogay
(Liverpool) 10 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa la soo sheegayaa inuu albabada u furay fikradda ay dib ugu soo celin karaan garoonka Anfield ciyaaryahankii hore ee Reds, Philippe Coutinho suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Coutinho ayaa haatan amaah ugu ciyaara naadiga Bayern Munich ee dalka Jarmalka, kaddib markii uu ka soo tagay kooxda milkiyaddiisa iska leh ee Barcelona, naadiga difaacanaysa horyaalka Bundesliga ayaana fursad u haysata inay xiddiga xulka qaranka Brazil si rasmi ah u wada iibsan karto dhammaadka xilli ciyaareedkan 2019-20.
Bayern ayaa lagu soo waramayaa inay u muuqato inaysan bixin karin qiimaha lagu lagu rabo Coutinho, taasoo keentay inay soo baxaan warar sheegaya in Barca ay xagaagan ku iibin karto 68 milyan oo gini laacibkan khadka dhexe.
Manchester United iyo Manchester City ayaa labadaba la la xiriirinayaa laacibkan 27-sano jirka ah, laakiin sida ay warinayso Jariiradda The Express, Kooxda Liverpool ay isku dayi karto inay dib ula soo saxiixato.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in xiddiga Bayer Leverkusen ee Kai Havertz uu yahay bartilmaameedka koowaad ee kooxda Merseyside-ka suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, laakiin Klopp ayaa xiisaynaya Coutinho haddii kooxda haysata horyaalnimada Yurub aysan awood u lahayn inay heshiis la gaarto xiddiga reer Jarmal.
Barca ayaa Liverpool kala soos axiixatay Coutinho bishii Janaayo sanadkii 2018, waxaana heshiiskaas uu ku kacayey 142 milyan oo gini, laakiin xiddiga reer South America ayaa si weyn ugu dhibtooday inuu la qabsado kooxda ku dheesha garoonka Camp Nou.
"Bruno Fernandes waxa uu faa’iido u noqon doonaa Man United" – Xiddig ka tirsan Kooxda Manchester City